Akụkọ ihe mere eme nke Shenzhen Feimoshi Technology Limited
Onye isi anyị bụ otu n'ime ndị na-akwado ntụrụndụ RC.N'ime oge ahụ, ọ mụtara ọtụtụ ihe gbasara nkà na ụzụ na ihe onwunwe.Mgbe ọ maara ụkọ nke ihe omume ntụrụndụ ma chọọ ịmepụta etiti kachasị mfe na ike dị elu.
Ọ nwara ọtụtụ ngwa ngwa ime ya.O mechara kpebie iji eriri carbon mee ka ọ bụrụ eziokwu.
E hiwere ụlọ ọrụ anyị na August 16, 2008. N'ime oge a, anyị na-agba mbọ nyocha otú carbon fiber, ụdị ihe ọhụrụ, nwere ike isi ghọta ihe ndị ahịa chọrọ.Ihe ndị a bụ ihe mgbaru ọsọ anyị mgbe niile.Mgbe ụfọdụ, anyị na-amụta na ndị ahịa si nlereanya nwere ike mechaa site na ojiji nke CNC ịkpụ na carbon eriri tube.Site na mgbe ahụ, anyị malitere ịhazi ihe osise nke ndị ahịa.
N'otu oge ahụ, anyị na ndị ahịa na-abanyekwa nkwekọrịta nzuzo, ka ndị ahịa wee họrọ anyị karịa n'ụzọ dị jụụ.Dị ka ọtụtụ ndị mmadụ na ahịa na-aghọta dị iche iche feedbacks nke ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-eji ndị ahịa, anyị otu injinia na-eche echiche banyere otú e si edozi nsogbu ndị a, na anyị malitere na-aga n'ihu mgbalị nke pụrụ iche crafts (chamfering, sinking,) ntinye, wdg).Ọ na-eme ka anyị nweta nzaghachi ka mma na ahịa eriri carbon.
Septemba 2015 ruo ugbu a:
Kemgbe Septemba 2015, iji meghachi omume n'ihe gọọmentị chọrọ maka nchekwa gburugburu ebe obibi, anyị ebulitela akụrụngwa anyị wee mepee ihe ọhụrụ dị ịrịba ama na ụlọ ọrụ fiber carbon anyị.
Site na nchịkọta nke ọtụtụ ndị ahịa, ihe ndị ahịa chọrọ na-emepe emepe mgbe niile.Anyị na-enwe ọganihu ma soro ndị ahịa anyị nweta nnukwu ahịa.
Anyị kwenyere na ahịa eriri carbon ga-eji nwayọọ nwayọọ na-abanye na ndụ anyị kwa ụbọchị wee ghọọ ngwaahịa aha ezinụlọ.
N'ime ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịhazi ụdị ngwaahịa fiber carbon dị iche iche maka ndị ahịa, dị ka arịa ụlọ carbon, ngwa egwu carbon fiber, drones, wdg.